Fiaramanidina “VOL MH370” : “Omena valisoa izay manam-baovao”, hoy ny fianakavian’ireo mpandeha | NewsMada
Fiaramanidina “VOL MH370” : “Omena valisoa izay manam-baovao”, hoy ny fianakavian’ireo mpandeha
Tonga tany Toamasina ireo fianakavian’ny niharam-boina tamin’ilay fiaramanidina Vol MH 370 avy any Malezia, nanjavona tamin’ny 8 marsa 2014. Nampahafantatra ireo mpanao gazety ny mombamomba ny fanjavonan’ity fiaramanidina nitondra olona 239 izy ireo. Nanentana ny mpanjono an-dranomasina ihany koa mba hanome vaovao azy ireo, ary misy ny valisoa lehibe omeny raha marim-pototra izany.
Araka ny fanazavan’i Ghislain Watterlos, vadin’ny renim-pianakaviana iray sy ny zanany anisan’ny tao anatin’ny MH 370, tsy mbola nisy hita popoka ireo mpandeha anjatony ireo na iray aza. Na ny mety ho fatin’ilay fiaramanidina aza, tsy fantatra izay misy azy. Tsy fantatra mazava izay tena vaovao marina momba ity fanjavonan’ny MH 370 ity, roa taona aty aoriana. Nanosika ireo fianakaviana hitady ny marina ny toe-draharaha, ary izao tonga aty Madagasikara izao izy ireo mihevitra ny hahita mangirana. Taorian’ny nahitana potik’ilay fiaramanidina tany La Réunion sy tany Sainte Marie ny nampisy ny tsirim-panantenana ho an’ireo fianakaviana.
Efa teto an-dRenivohitra izy ireo, izao any Toamasina izao, ary hamonjy any Nosy Be.
Araka ny efa nambaran’ireto fianakavian’ny niharam-boina, izay nanangana ny fikambanan’ny fianakavian’ny MH370, izay ahitana teratany frantsay, indianina, amerikanina, malezianina ary sinoa izay tena betsaka amin’ireo.
Manomboka liana ny olona
Taorian’ny valan-dresaka ny fampahafantarana momba ny vol MH370 nataon’ireto fianakaviana ireto, manomboka liana amin’ity raharaha ity ny ankamaroan’ny olona eto amintsika. Maromaro ny efa nitady ny laharan’ny finday na mailaka an’ireo teratany vahiny ireo. Mety manana vaovao ampitaina na koa liana amin’ny vaovao ka mety hangata-panazavana.
Amin’ireto vahiny tonga eto amintsika ireto, heveriny fa fomba mahomby ny fampahafantarana sy karazana antso amin’ny fanampiana tahaka izao. Eo ihany koa ny valisoa mety homen’izy ireo. Ahiahy ny mety hisian’ny mpanararaotra amin’ny trangan-javatra tahaka itony. Nilaza anefa ireto vahiny fa hisy ihany ny fanamarinana raha mari-pototra ny vaovao omena azy ireo na tsia. Tantara mitohy…